हिंसाको आरोप लगाएर पतिलाई पठाइन् जेल, एक भिडियोले खोलिदियो पत्नीको सबै पोल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हिंसाको आरोप लगाएर पतिलाई पठाइन् जेल, एक भिडियोले खोलिदियो पत्नीको सबै पोल
सिडनी। अस्ट्रेलियाकी एक महिलाले आफ्ना पतिमाथि कुटपिटको आरोप लगाउँदै उनलाई जेल पठाइन् । तर, छिट्टै एक भिडियोले पत्नीको पूरै पोल खोलिदियो । रिपोर्टका अनुसार यहाँका फैजल खान नामका युवाको मुस्लिम डेटिङको माध्यमबाट अस्मी नामकी महिलासँग चिनजान भएको थियो । केही दिनपछि दुवैले बिहे गरे । तर, बिहेको ८ महिनापछि नै महिलाले आफ्नो असली रंग देखाउन सुरु गरिन् ।
फैजलले प्रहरीलाई बताए कि उनलाई पहिले नै पत्नीमाथि शंका भइसकेको थियो । उनले बुझिसकेका थिए कि उनीसँग विवाह अस्ट्रेलियाको भिसा पाउनको लागि गरिएको थियो । जब अस्मीले थाहा पाइन् कि फैजलले उनको असलियत थाहा पाइसकेका छन्, त्यसपछि उनले फैजललाई फसाउने योजना बनाइन् । फैजलले भने कि उनकी पत्नीले उनलाई फसाउने कुरा आफैं भनेकी थिइन् । फैजलले भने ‘एक दिन राती उसले मलाई धम्की दिँदै भनेकी थिइ, तिमी मलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने ? हेर्दै जाउ म तिम्रो के हाल गर्छु ।’
फैजललाई फसाउनको लागि उनकी पत्नीले आफैं लिफ्टमा गएर आफ्नै अनुहारमा कैयौं पटक मुक्का हानिन् जसका कारण उनको आँखामुनि कालो घेरा बन्यो । त्यसपछि उनले पुलिस बोलाइन् । पुलिसले फैजललाई पक्राउ गरेर लिएर गयो । त्यसपछि फैजलले वकिलको मद्दत लिए । वकिल र पुलिसको सहयोगमा फैजलले आफू र्दिोष भएको प्रमाण जुटाउन सुरु गरे ।
उनले लिफ्टको सिसिटिभी फुटेज निकाल्न लगाए जसबाट वास्तविकता सबै खुल्यो । अस्मी लिफ्टमा मआफैंलाई मुक्का हानिरहेकी देखिन् त्यसपछि भने उनको चाल उल्टो पर्यो । फैजलले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्नको लागि वकिलको पारिश्रमिक समेत अन्य शुल्कवापत २० हजार डलर खर्च गरेका थिए । फुटेज सार्वजनिक भएपछि फैजलकी पत्नी फरार छिन् । फैजलले पुलिससँग ती महिलाबाट आफूलाई ज्यानको खतरा रहेको भन्दै उनलाई समातेर आफ्नो देश मोरक्को पठाइदिन अपिल गरेका छन् ।